Global Voices teny Malagasy » Miahiahy momba ny “polisy misahana ny fitondran-tena” ny Azerbaijaney · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Oktobra 2019 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Tamin'ny 2 septambra, nampahafantarina  ny mponina tao Baku fa karazana mpitandro filaminana vaovao no hanao fisafoana eny an-dalambe ao an-drenivohitra Azerbaijaney. Nanonona ny fanambaràn'ny Departemantan'ny polisy tany Baku ny fampahalalam-baovao avy any an-toerana, fa nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra fa handray “fepetra fisorohana hentitra” hiadiana amin'ireo olana “mifanohitra amin'ny soatoavina ara-pitondrantenan'ny vahoaka sy ny fisainan'ny firenena.” Voalaza fa noraisina taorian'ny fitarainana maromaro nataon'ireo mponina tany amin'ny sampan'ny polisy ny fanapahan-kevitra.
Ny filoham-pirenena Ilham Aliyev no nitondra an'i Azerbaijan nanomboka ny taona 2003. Malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tombontsoa ara-barotry ny fianakaviana Aliyev; ny fisehosehoana sy ny fiderana ny  fomba fiainan'izy ireo amin'ny gazetiboky iraisampirenena sy ny fanadihadiana amin'ny asa fanaovan-gazety. Saingy rehefa ao an-tanidrazana, mitoetra ho fomba fanao miely patrana hanalàna baraka ny Azerbaijaney ho manao fitondrantena tsy mendrika, na inona na inona izany, ny fiantsoana ny “soatoavina sy toe-tsaina nasionaly” mandala ny nentin-drazana .
“Midika ve izany fa ratsy fitondran-tena ny vehivavy manao akanjo fohy na ny mpivady mifampitanana?” hoy ilay mpisolovava Samira Aghayeva nanontany  tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Radio Azadliq, tolotra tamin'ny fiteny Azerbaijaney amin'ny Radio Free Europe. Notohizan'i Aghayeva fa tsy niresaka momba ny tena fandikana ny “toe-tsaina nasionaly” ny manampahefana, izay noheveriny fa ny polisy tenany mihitsy no tsy mahafantatra ny fomba hitantanana ny raharaha tahaka izany.
MeydanTV, sehatra media tsy miankina miasa any an-tsesitany, namoaka sariitatra  avy amin'i Gunduz Aghayev, izay maneso ny “polisy ara-moraly”. Haingana avy hatrany ireo Azerbaijaney nizara ny fisalasalany tao amin'ny tambajotra media sosialy:
Tsy manome ny isan'ny olona ampiasaina amin'ity sehatra manokana ity ny biraon'ny antontanisam-panjakana. Araka ny angon-drakitry  ny UNAIDS, tombanana ho 32 000 ny isan'ireo mpivaro-tena any Azerbaijan tamin'ny taona 2018, fiakarana maherin'ny 5000 niainga tamin'ny taona 2011. Nandritra izany fotoana izany, nanomboka nanakiana mafy ny fitomboan'ny fivarotan-tena hita ao amin'ny tanànany ny mponina ao Baku.
Raha ny marina, maro amin'ireo manampahaizana izay niteny  momba ny fivelarana vao haingana no miombon-kevitra fa tsy azo antoka hampidina ny asa fivarotan-tena ny fampidirana ny polisy misahana ny fitondran-tena. Nilaza kosa izy ireo fa tokony hahita vahaolana amin’ny tena antony  mahatonga ny olona ho any amin'ny sehatry ny fivarotan-tena ny manampahefana, tsy maintsy miatrika ireo antony fototra ry zareo toy ny tsy fahampian'ny fanabeazana tsara, ny tsy fitovian'ny karama ary ny tsy fahampian'ny hirika ara-toe-karena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/04/143383/
 fisehosehoana sy ny fiderana ny: https://1news.az/news/ikony-stilya-leyla-i-arzu-alievy-fotosessiya
 fanambarana : https://jam-news.net/police-in-baku-begin-patrol-to-defend-national-and-moral-values/
 nanomboka nanakiana mafy : https://oc-media.org/azerbaijan-s-new-morality-police/
 ny tena antony: http://www.contact.az/ext/news/2019/9/free/Social/az/83476.htm